WA WF andian-tsarimihetsika mitsivalana takelaka takelaka-Plate Freezer-Square Technology Group Co., Ltd.
Ny vata fampangatsiahana lovia toy izany dia azo ampiasaina amin'ny fanamainam-bokatra amin'ny vokatra isan-karazany ao anaty fitoeram-pako, vilany sy boaty, mety amin'ny hazan-dranomasina, hena kely fonosana ary sakafo hafa ao anaty sakana. Ny takelaka ao anatiny dia apetraka mitsivalana mba hahafahan'ny vokatra apetraka ao anaty fitoeram-bokatra na fonosana ao anaty lovia mba hivaingana kokoa.
● Vita amin'ny alimina mahazaka rano anaty ranomasina, naoty sakafo. Ny takelaka alimina 25mm matevina dia manome tanjaka avo, fanoherana harafesina avo ary fitarihana hafanana. Ny takelaka dia voaforona mandeha ho azy ary manana déformation farafaharatsiny.
● Ny valindrihana dia voaravaka sombin-javatra polyurethane mihosinkosina mba hahazoana antoka rafitra matanjaka ary ahenao ny fahaverezan'ny hatsiaka amin'ny fanesorana ireo tonon-taolana.
●Ny fonenan'ny vata fampangatsiahana kianja dia vy vy. Izy io dia mahazaka tontolo iainana masiaka sy mora diovina.
●PTFE Leak-free malefaka fantsom-pifandraisana, flanged na kofehy. Ny hosotra dia rakotra randrana vy 304L.
◆ Haben'ny effaporation habe mahomby: 2020 × 1252 (mm)
◆ Faritra mangatsiaka: 25.2m2
◆ Fangatahana hatsiaka: 1500kg / boribory (Miorina amin'ny 15kg / sakana, refin'ny sakana: 600mm × 400mm × 80mm)
◆ Isa-takelaka: 10; Fitaovana mangatsiaka: 10
◆ Fanesorana takelaka: 55mm - 108mm
◆ Famatsian-drano: Paompy
◆ Fampidinana fampangatsiahana Max: 46kw (Temp evaporative: -35 ℃, Temp condensing: + 35 ℃)
◆ Temp infeed: + 20 temp Temps outfeed ::-18℃
◆ Tsipika ranoka: φ38 Tsipika gazy: φ76
◆ Toeram-pifandraisana: (1) Herin'ny maotera paompy solika: 1.5kw (380V / 50Hz)
(2) Mametaka gazety. paompy solika: 5MPa
(3) Fantson'ny paompy misy menaka: 10L / min
(4) Menaka mandeha amin'ny rivotra: # 46; 68kg (namboarina)
◆ Herinaratra napetraka: 1.5kw
◆ lafiny ankapobeny: 3460mm (L) × 1900mm (W) × 2990mm (H)
◆ Weight: 3600kg